Mgbanwe maka Mwepu nke Ime Mmụọ na Nzuzu - WRSP
1952 (March 12): Gregorian (“Grieg”) Bivolaru mụrụ na Tărtăşeşti, na mpaghara Romania nke Muntenia.
1970: Bivolaru malitere ịkụzi yoga na Bucharest.
1971: Ndị uwe ojii ndọrọ ndọrọ ọchịchị Romania, bụ Securitate, tinyere Bivolaru ka ọ na-ele ya anya maka mmasị ya na yoga na esotericism.
1972: Bivolaru natara ịdọ aka na ntị site na Nchebe.
1973-1974: Securitate gbara ajụjụ ọnụ ugboro ugboro Bivolaru.
1982: ọchịchị Kọmunist machibidoro omume yoga na Romania.
1984: E jidere Bivolaru n'ihi na ọ gara n'ihu na-akụzi yoga. Ọ gbapụrụ n'ụlọ mkpọrọ Securitate (ihe pụrụ iche na Communist Romania) wee maa ya ikpe otu afọ n'ụlọ mkpọrọ n'ihi nchụso a.
1986: Bivolaru natara ịdọ aka ná ntị ọzọ site na Chebe.
1989 (July 20): A na-eduzi mwakpo megide ụlọ akwụkwọ yoga na Romania. E jidere Bivolaru ọzọ.
1989 (August 15): Mgbe o guzogidere nrụgide ịhapụ ọrụ yoga ya, Bivolaru kwupụtara na ọ bụ onye nzuzu ma jiri ike tinye aka na ụlọ ọgwụ psychiatric, ụzọ nkịtị iji gbochie ndị mgbagha ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Communist Romania.
1989 (Disemba): Ọchịchị ndị Kọmunist Ceausescu dara. A tọhapụrụ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, gụnyere Bivolaru n'ụlọ mkpọrọ na ụlọ ọgwụ psychiatric.
1990 (Jenụwarị): Bivolaru maliteghachiri usoro ọmụmụ yoga ya ma debanye aha ụlọ akwụkwọ ya dị ka Movement for Integration Spirit in the Absolute (MISA).
1991-1993: MISA gbasaa ngwa ngwa, ya na ọtụtụ iri puku ndị otu nọ na Romania na isi ndị e guzobere n'ọtụtụ mba ọzọ.
1993-1994: Mgbasa ozi megide Bivolaru dị ka "onye ndu òtù nzuzo," nke a boro ebubo iji "anwansi ọchịchịrị" na omume ndị ọzọ na-adịghị mma, malitere na mgbasa ozi Romania.
1997: Ndị ọrụ ọgụgụ isi Romania, nke bụbu "Chebe," malitere idebe MISA na-ele anya, na-ekwu na ọ bụ egwu nke nchekwa mba.
1998: MISA haziri ihe omume Yang Yogic nke mbụ, nke ndị mmadụ 5,000 bịara.
2004 (May 18): Ndị uwe ojii Romania wakporo MISA ashrams na mba ahụ ma jide Bivolaru, na-ebo ya ebubo na ya na nwa akwụkwọ MISA dị afọ iri na asaa, MD
2005: Enwere onwe ya n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọ na-echere ikpe, Bivolaru gbagara Sweden. Na December, Courtlọikpe Kasị Elu nke Sweden jụrụ arịrịọ ndị Romania maka mbupụ ya, na-ekwenye na ikpe ikpe ya dabere na nkwenkwe okpukpe ya.
2005: MISA haziri nzukọ na nzukọ mbụ nke European Federation nke Yoga na Bucharest, na isiokwu bụ "Unitydị n'Otu na Di iche iche."
2006: Bivolaru nyere ikike ịbụ onye gbara ọsọ ndụ na Sweden dabere na Nkeji edemede 1 nke Mgbakọ Geneva.
2008: Akwụkwọ ahụ Mgbanwe nke Yoga Movement na 1980s, site na ndị na-akwado ndị na-akwado ihe ndị ruuru mmadụ na Rom na ọkà mmụta sayensị bụ Gabriel Andreescu, Polirom bipụtara na Romania. Ọ kọwara nhụsianya nke mmegharị yoga na ndị nkuzi, gụnyere Bivolaru, na ndị Kọmunist Romania.
2009: N'ime MISA, e guzobere Charismatic Theophanic Movement na ebumnuche nke ịkwalite oghere n'ebe Chineke dị ka nkwenkwe onye ọ bụla, gụnyere Iso Christianityzọ Kraịst.
2010: Akwụkwọ Bekee nke Bivolaru Ụzọ Nzuzo Na-ezighị ezi nke Ịhụnanya Maka Obi Ụtọ na Mmezu n'Ọlụ Di na Nwunye e hiwere na London.
2010 (Eprel 23): N'okwu Rom, Bivolaru ahụghị na ikpe mara ya na ọkwa mbụ.
2010 (August): Na mgbapụ kwa afọ nke MISA haziri na Costineşti, Romania, e mepụtara usoro ntụgharị uche ọhụrụ, nke a maara dịka "Usoro Kachasị Elu na nke Ọma."
2011 (March 14): Na ikpe Romania, a chọpụtaghị Bivolaru na ịrịọ arịrịọ.
2012 (Disemba 6): Ndị uwe ojii Italiantali wakporo ụlọ nke ụmụ akwụkwọ MISA na Italytali. Enweghị ebubo ebubo.
2012: Ihe karịrị mmadụ iri ise nke nzuko omeiwu European bịanyere aka n'akwụkwọ ozi na-akwado MISA na Bivolaru nke ezigara ndị ọchịchị Romania. Nzukọ na-emejọ na mmejọ nke ikpe ikpe nke Bivolaru na Romania haziri na European Parliament.
2013: Courtlọikpe Kasị Elu nke Roman kagburu mkpebi ụlọikpe ndị obere, hụrụ Bivolaru ikpe mmekọrịta nke ya na nwatakịrị nwanyị dị afọ iri na asaa, ya bụ MD, ma maa ya ikpe ịga mkpọrọ afọ isii.
2013: Gabriel Andreescu bipụtara akwụkwọ ọhụrụ, Ịchọpụta Ụgha Ọjọọ, na-akatọ ikpe ikpe na mgbasaozi megide MISA na Romania.
2014 (Septemba 16): Courtlọikpe Europe nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ (ECHR) kpebiri na gọọmentị Romania dara iwu ikike nke onye otu MISA Dana Ruxandra Atudorei, onye dị afọ iri na itoolu abanyela n'ụlọ mgbaba mgbaba.
2016 (February 26): E jidere Bivolaru mgbe ọ na-aga France.
2016 (Eprel 26): ECHR kpebiri na mmadụ iri abụọ na isii nke MISA, bụ ndị a na-emegbu na mwakpo 2004, nwere ikike ịnata € 291,000 n'aka gọọmentị Romania.
2016 (July 22): Bivolaru wepụtara na France ma kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ ndị Romania, n'agbanyeghị ọnọdụ ya dị ka onye gbara ọsọ ndụ na Sweden.
2016: Otu ndị na-ese ihe na-eme yoga dị ka MISA si kụzie malitere oru (ọ bụghị nke MISA na-akwado ya) nke mechara na fim ahụ. Na-aga n'ihu (Ịnọgide na-ahụ n'Anya), njikọ nke echiche banyere ịhụnanya na mmekọahụ nke MISA kwadoro.
2017 (February 28): Na mkpebi ahụ Bivolaru vs. Romania, ECHR nyere iwu ka Romania kwụọ ụgwọ Euro 6,980 Bivolaru n'ihi na ejidere ya na iwu akwadoghị na 2004.
2017 (September 13): Bivolaru nwere onwe ya na parole.
Gregorian ("Grieg") A mụrụ [Image na nri] na Tărtăşeşti, na mpaghara Romian nke Muntenia, na March 12, 1952. Ndị na-ede akụkọ ndụ ya na-ekwu na ọ malitere inwe ọnọdụ mmụta dị iche iche mgbe ọ bụ nwata. Mgbe ọ bụ nwa okorobịa, Bivolaru nwere mmasị na mmụọ ime mmụọ na yoga site n'ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke ndị okpukpe Rom na-akọ akụkọ ihe mere eme Mircea Eliade (1907-1986) na ọbụna kwekọrọ na ya. Ọ bụghị ọtụtụ akwụkwọ na yoga dị na ndị Kọmunist Romania, mana Bivolaru na-enwe ike ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ Paramahansa Yogananda (1893-1952), Swami Sivananda Saraswati (1887-1963), na Sri Ramakrishna (1836-1886).
Na 1970, mgbe ọ dị afọ iri na asatọ, Bivolaru malitere ịkụziri yoga na Bucharest. Ejiri ọchịchị Kọmunist nke Nicolae Ceausescu (1918-1989) kpọọ Yoga, ma machibido ya kpam kpam na 1982. E jidere Bivolaru na 1982, mgbe ahụ ọzọ na 1989, ma banye n'ụlọ ọgwụ psychiatric nke Poiana Mare, bụ nke kwadoro ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ.
Mgbe ọchịchị ahụ dara na December 1989, a tọhapụrụ ya ma malite ọzọ na-akụzi yoga. Na 1990, o hiwere MISA, Movement for Integration Spirit into Absolute. [Foto na nri] Na afọ post-Ceausescu ozugbo, yoga kụziri Bivolaru, bụ nke gụnyere inwe ekele dị mma banyere mmekọahụ dịka ụzọ nye Chineke, pụtara n'ihu ọtụtụ ndị dị ka ihe nnọchianya nke nnwere onwe ọhụrụ ahụ. Ihe ịga nke ọma bụ ihe dị egwu. N'afọ ole na ole, e nwere na Romania iri anọ ashrams nke MISA, ndị 750 oge zuru oke, na ọnụ ọgụgụ zuru ezu na 40,000.
N'ikpeazụ, site na Romania ọrụ ahụ gbasaa n'ụwa. Ụlọ akwụkwọ yoga na-adabere na nkụzi Bivolaru malitere n'Austria, United Kingdom, Germany, France, Italy, Denmark, Sweden, Finland, Hungary, Czech Republic, Ireland, Bosnia, Slovenia, Norway, Cyprus, United States, South Africa, Argentina , Uruguay, India, na Thailand. Niile ụlọ akwụkwọ yoga a bụ otu òtù a kpọrọ ATMAN, Òtù Mba Nile nke Yoga na Ntụgharị uche.
Site na 1993, mgbasa ozi ndị Rom na-ahụ maka mgbasa ozi wakpoo Bivolaru, na-akpọ ya dị ka "nwoke guru" ma na-ebipụta akụkọ akụkọ banyere akpachara anya mmekọahụ ya na ọtụtụ ụmụazụ ụmụ nwanyị. Ndị uweojii na usoro ikpe ga-esochi (dịka akọwapụtara ya na "Ihe / Ihe Ịma Aka"). N'ihi ndị uweojii nọgidere na-eme ihe ike, karịsịa, ma ọ bụghị naanị na Romania, MISA furu ụfọdụ ndị òtù. Otú ọ dị, ọ ka na-arụsi ọrụ ike ma na-eto eto n'ọtụtụ mba, yana ụmụ akwụkwọ 20,000 na ndị 1,000 oge dum nọ na obodo MISA na ATMAN. Kwa afọ MISA na-ahazi na Romania nzukọ abụọ na Herculane na May na Costineşti n'August. Onye ọ bụla nwere nkezi ndị na-abịa 5,000. A na-ahazi nzukọ na mba ndị ọzọ.
Isi mmalite nke nkuzi MISA dị ọtụtụ: okpukpe Hindu, Buddha, Taoism, Sufism, Esotericism Western, na esoteric Christianity. MISA adịghị atụ aro na ụmụ akwụkwọ ya, bụ ndị ọtụtụ n'ime ha zụlitere dị ka ndị Kraịst, hapụrụ Iso Christianityzọ Kraịst ka ha nakweere echiche ụwa ọzọ. Na 1997, nyocha nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze bụ Carmen Mărcuş kpughere na pasent 62.5 nke ụmụ akwụkwọ MISA na Romania gara n'ihu na-ele onwe ha anya dị ka "ndị mepere emepe" na Chọọchị Ọtọdọks nke obodo (Mărcuş 1997: 139). Na 2009, Bivolaru guzobere n'ime MISA Mişcarea Charismatică Teofanică (Theophanic Charismatic Movement), nke bu iji kwalite mmeghe nke Chukwu dika nkwenkwe okpukpe ma ọ bụ nke okwukwe nke onye ọ bụla, gụnyere Ndị Kraịst.
MISA na-akuzi ụzọ na usoro dịgasị iche iche, site na ihe ederede ederede iji mee ka ndị mmụọ ozi kwurịta okwu, dị ka akụkụ nke "ịdị n'otu dị iche iche." Ụzọ dị iche iche dị n'otu site na ihe òtù ahụ kwenyere na ha bụ ụkpụrụ dị mkpa nke yoga. A na-atụle ozizi ọ bụla ma e wezụga ọdịdị nke akụkọ ihe mere eme na omenala ya, na mkpa ya bụ "esoteric", nke, dika MISA si kwuo, kwekọrọ na ọtụtụ ụzọ ọzọ. Otú ọ dị, o doro anya na isi iyi na mịkasị nke MISA bụ Tantrism na anyị na-achọta n'ọtụtụ echiche dị iche iche site na mkparịta ụka nke Kashmiri Tantric Sage Abhinavagupta (nke 950-1016). "Vira" na "Shakti" na-enye ndị nwoke na ndị nwanyị ọzụzụ Tantric ka ọ bụrụ ndị ọzọ.
Ọ bụ, n'ezie, ọ bụghị eziokwu na Tantrism bụ naanị banyere mmekọahụ. N'ezie, site n'ibilata mgbagwoju anya Tantric nke ụwa maka ozizi naanị banyere mmekọahụ, ndị mgbasaozi na ndị iro na-enyekarị echiche dị egwu banyere ya. Anyi kwesiri icheta na odighi otutu ndi mmadu kwenyere banyere nkpo okwu nke ndi mmadu na-ekwu na "Tantrism" onwe ya bu echiche ndi ozo nke ndi ode akwukwo di iche iche cheputara, ebe omenala Hindu na okpukpe Buddha maara nani "Tantras," ya bu akwukwo, omenala na usoro ndị dị nnọọ iche n'etiti ibe ha ma ọ bụghị mgbe ha guzobere usoro dị n'otu. Ma ọbụna a ezi uche, na dịka otu n'ime ọtụtụ nkọwa ndị na-asọmpi, Tantrism bụ maka iru nkọwa nke dabeere na ihe onwunwe ma ọ bụ nke a - nke ụwa, nke a na-ewere dị ka akụnụba kama ịme ihe mgbochi. Mmekọahụ bụ otu n'ime ihe ndị a, ma ọ bụghị naanị otu, na ntụgharị uche [Image na nri] na omume yoga dị oke mkpa.
Otú ọ dị, usoro mmekọahụ nke MISA dọtara uche pụrụ iche nke ndị ọkà mmụta na ndị nkatọ. Usoro Tantric kachasị MISA na-adabere na inwe mmekọahụ, ya bụ orgasm na-enweghị ejaculation. Uzo a na-akuzi na agagh enwe obi mgbagwoju anya site n'inweghi obi uto ma obu obi uto. Kama nke ahụ, ebe obibi dị ike ma na-agbanweghachi. Nye ụmụ mmadụ, ebe nile na-enye uru maka ịmịnye spam ahụ n'ime ike. Otu ihe analogous, nke na-arụsi ọrụ ike, na-enwekwa ahụmahụ nke ụmụ nwanyị, na-agbanyeghị aka na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbalị, dị ka ike mmekọahụ na-arị elu site na chakras. MISA na-akuzikwa na ebe obibi mmekọahụ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ ime mmụọ n'ezie, ihe ọ rụpụtara (karịsịa maka ndị ikom) adịghị abịa ozugbo. N'ezie, a na-arụ ụka na edemede nke Kundalini Shakti, ya bụ nchịkọta nke ike dị ike nke dị na isi nke ọkpụkpụ azụ, na-eru ihe dịka otu afọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu na mpaghara yoga (Bivolaru 2011) . A na-elekarị anya dịka akụkụ nke usoro mgbagwoju anya nke usoro gụnyere usoro yoga dị iche iche na mgbalị ọgụgụ isi na-adabere n'ịkụzi nkwenkwe esoteric.
MISA na-eji ihe dị iche iche sitere na ozizi dị iche iche nke Eastern na Western, ma ekwenyeghi na ihe nile nke aha esotericism na-adaba. Okwu dịgasị iche iche nke MISA tụlere gụnyere ụfọdụ ndị gosipụtara esemokwu. Dịka ọmụmaatụ, e nwere nkwurịta okwu mgbochi na-akwadogide n'ime MISA, akwụkwọ ndị Bivolaru na-ede na-egosipụtakwa Freemasonry na òtù ndị ọzọ, dịka Illuminati, dịka isi iyi nke Western World decadence na ọtụtụ ihe ọjọọ. Dika ihe edere ufodu ufodu ufodu MISA gosiri, Roman Catholic na omenala ndi Orthodox nke Freemasonry nogidere ya, ya na nkwenye nke oge ndi iro Freemason. Ndị na-akwado MISA na - akọwa ihe ndị a site na Bivolaru na okwu ndị siri ike. "Freemasons, otu onye n'ime ha kwuru, tụlee Gregorian Bivolaru dị ka JAN VAN HELSING of Romania, bụ onye na-agbagha ha ọtụtụ ugboro site na nkwupụta nzuzo ya nke ihe nzuzo 'egwu' nke naanị Freemasons maara" (Yogi Blogger 2012).
Otu udiri ihe ndi ozo di n'ime MISA abiakwara ihe banyere ndu nke ndu ndi ozo. Dịka Freemasons chere na ha nwere nkwarụ na mpụga ndị ọzọ, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ MISA na-azọrọ na ha na ndị na-enweghị ihe ọ bụla dị mma, na-arụkọ ọrụ ọnụ na Council Kasị Elu Galactic. Bivolaru na-atụ aro na nkwurịta okwu na 2013 na ndị ọzọ nwere ike ịba uru iji kpochapụ nnukwu meteorite tupu ya daa na obodo Russia nke Chelyabinsk, ihe ga-eme ka ọdachi zuru oke maka ụwa dum (Matei 2013).
Ọkà mmụta Danish bụ Sara Møldrup Thejls, n'ime ọmụmụ ihe ọmụmụ seminal ya, hụrụ na MISA ihe atụ nke "mmadụ ịchọ ọdịmma onwe ya," ihe mgbagwoju anya nke nkwekọrịta na agbụrụ na afọ ọhụrụ, ma kweta na "nkwekọrịta nkwekọrịta bụ nke a na-ahụkarị na ya." ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ịchọta ya na mmegharị ndị na-emepụta ihe (Møldrup Thejls 2015: 72).
Omume nke MISA gụnyere ma ememe ememe kwa ụbọchị, ebe ụmụ akwụkwọ na-amụta otú e si arụ ụdị ụdị yoga, na ememe agbakọta ndị a haziri n'usoro nzukọ nzukọ kwa afọ na mgbakọ ndị ọzọ. Otu n'ime ihe ndị kachasị ama bụ Yang Yogic Spiral, ebe ọtụtụ puku mmadụ na-ejide aka ma na-atụgharị uche n'èzí. [Foto dị n'aka nri] Ha na-ahazi dị ka ihe ịrịba ama ndị na-agụ kpakpando si dị na mgbasa ozi kwadoro ịba uru bara uru nke ntụgharị uche.
Na mwepụ kwa afọ na Costineşti, na 2010, a malitere imepe "Ụzọ Kasị Elu na Kwesịrị Ekwesị," bụ ụdị ọhụrụ nke ntụgharị uche. MISA kwenyere na ntụgharị uche nke ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nwere ike ime mgbanwe dị mkpa na ọkwa ụwa niile, nakwa na omume ndị dị otú ahụ nwere ike inwe mmetụta iji gbochie ihe omume Chelyabinsk meteorite.
Ihe òtù ahụ na-akpọ "ihe ebumnuche" ahụ bụ ụzọ ọzọ nke ịmepụta ume Chineke site na ihe ndị dị na microcosmic dị ka ụdị na agba. N'otu aka ahụ, MISA na-akwalite egwu, ịgba egwú na ihe nkiri. Dị ka Mihai Stoian, otu n'ime ndị nkụzi yoga na-edu ndú MISA, nkà bụ ụzọ ziri ezi iji kpọte mkpụrụ obi (Stoian 2016). Ndị na-ese ihe na MISA dị ka Ines Honfi na-emepụta yantras, ya bụ, eserese Tantric nwere ụfọdụ na agba. Ha kwenyere na ndị mmadụ na-eji ihe osise ndị a na-ebute ngwa ngwa, na uche ha ga-eji nwayọ jiri ọdịdị nke yantra na-atụgharị uche, na-ejuputa na ike a kapịrị ọnụ ọ bụla ejirila nkà rụọ ọrụ.
Onye nkụzi ọzọ MISA, Nicolae Catrina, mepụtara "Yoga nke Mma" dịka ụzọ maka nghọta site na ịchọta ịma mma. Ezigbo omume (ebumnuche) niile nwere ike ịbụ mmalite maka Yoga nke Mma, ma ọ bụ "esoteric" n'ụzọ doro anya ma ọ bụ. Catrina na-ekwusi ike na ọ dị mkpa ka a tụlee nkà. Mgbe otu ndị na-amalite ịtụgharị uche na nkà nke nkà na ọnọdụ nke otu, onye ọ bụla nwere ahụmahụ ọkachamara na-emetụta ọhụụ nke ndị ọzọ niile, na-emepụta ọhụụ ọhụrụ nke ike ụwa.
Mmekọahụ na-ekerekwa òkè na ozizi MISA. Onye isi nkuzi Carmen Enache, onye na-amụ MISA, mepụtara ọtụtụ ihe nkiri egwuregwu, na nzube ahụ, ka o kwuru, nke na-eziga ozi ime mmụọ site na mmekọahụ (Introvigne 2017). Ụfọdụ n'ime ha chọtara ụzọ ha ga - esi too okenye ọnụ ụzọ, ma ndị ọzọ, gụnyere 2016 si Na-aga n'ihu (Continuoulsy Love, nke a tọhapụrụ n'asụsụ Spanish), [Foto dị n'akụkụ aka nri] enweghị ike iwere dị ka ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na okwu ọ bụla dị mkpa nke okwu ahụ. Ma, Enache na-ekwusi ike na, ọbụna n'oge mbụ ya, mmepụta mmekọahụ na-apụta ìhè bụ akụkụ nke ihe arụ dị nsọ na "ihe eji eme ihe" (Bella Maestrina 2003). N'adịghị ka ndị toro eto na-eto eto, ha kụziiri Tantric omume ndị dị ka ebe niile, ya bụ, orgasm n'emeghị ka ọbara na-adị ọcha, na ụdị ndị ọzọ nke anwansi, tinyere ụfọdụ na-adabere n'ememe mmiri.
N'oge na-adịbeghị anya, ndị òtù MISA n'otu n'otu, nke sitere na echiche ọhụrụ ha na nkà na erotic, kere ọtụtụ ọrụ, gụnyere ihe nkiri, foto, na ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ Extasia. E gosipụtakwara ihe ngosi a na ememe na ihe oriri na-eme ka ụwa ghara ịdị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmadụ agụọ ihe niile ahụ, ọ ga-edozi na etiti ọrụ ahụ bụ nkwupụta doro anya banyere ikewapụ nke ahụ na mmụọ, na nke ime mmụọ na nke ime mmụọ, dị ka "ọnya" dị egwu nke a chọrọ iji gwọọ, ikwe ndi nwanyi ka ha na "chi di n'ime ha" biaghachiri (lee akwukwo Artextasia).
Ndị nkatọ na-akpọ ihe ndị a na-akpali agụụ mmekọahụ, na ọbụna ebubo nke ihe rụrụ arụ na-egosi ihe nkiri egwuregwu na MISA. [Foto dị n'aka nri] N'ụzọ doro anya, ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mfe ikwu, ma ndị òtù MISA na-ekwusi ike na ebumnuche ndị dị adị. Ọ bụ ezie na nkà na-ezighị ezi na-eme ka ahụ mara mma ma na-enwe mmekọahụ, "ihe rụrụ arụ" na-egosi ihe jọgburu onwe ya na nnupụisi ahụ. N'okwu ụfọdụ, MISA na-egosi na e nwere njikọ dị n'etiti ọdịdị dị iche iche nke nkà na echiche dị iche iche nke Illuminati na Freemasonry na-akwalite, nke òtù ahụ na-ele anya dị ka ndị na-adịghị njọ na-arụ ọrụ taa megide ime mmụọ (lee Yogaesoteric nd).
Echiche abụọ na-emegiderịta onwe ha na-ekwukarị na mgbasa ozi kwesịrị idozi. Nke mbu bu na MISA dika mmeghari na emeputa ihe ndi ozo, tinyere foto na ihe nkiri. Ndị a bụ n'ezie atụmatụ nkeonwe nke ụmụ akwụkwọ, ndị gosipụtara echiche ụwa MISA n'ụzọ dị iche iche. Nke abụọ bụ na inwe mmekọahụ bụ isi okwu nke usoro ọmụmụ MISA. N'ezie, ọmụmụ gbasara mmekọahụ na-anọchi anya obere pasent nke ihe omume, nkuzi, na mbipụta MISA. Usoro ọmụmụ zuru ezu nke MISA gụnyere ihe ọmụmụ 2,100, nke ihe na-erughị 100 na-ezo aka na mmekọahụ. Ọbụna usoro ọmụmụ Tantra gụnyere ọmụmụ 600, nke ụfọdụ iri asaa na-ezo aka na mmekọahụ, mmekọrịta chiri anya, ma ọ bụ mmekọrịta di na nwunye.
Site na 1990 gaa na 1995, Gregorian Bivolaru, dịka odeakwụkwọ na onye nchoputa, duuru MISA, nke ndị otu ụmụ klas nke iri abụọ na isii nyeere aka. Ọ hapụrụ ọrụ a na 1995, mana ọ ka na-ele ya anya dị ka onye nduzi na onye ndụmọdụ dị mkpa na ihe niile MISA na-eme. A na-akwanyere ya ùgwù nke ukwuu na njem ahụ ma were ya dị ka nnukwu ikike na ajụjụ banyere ozizi.
A ka na-enyocha Bivolaru taa, ọ bụ ezie na ọnọdụ ya na Romania, ebe nsogbu ya na-aga n'ihu, anọgideghị na-ejide n'aka. Nlekọta nke MISA kwa ụbọchị na-ahapụ ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ndị kasị ochie na ndị a tụkwasịrị obi na Bivolaru, gụnyere Nicolae Catrina na Mihai Stoian.
MISA na umuntakiri nwanne ya (nke otu alaka ụlọ ọrụ Danish, NATHA, dị ka ihe dị mkpa na ịkwado alaka ndị ọzọ na mba ụwa) na-arụ ọrụ site na mpaghara ebe, ebe ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnata ozizi na ime ọtụtụ usoro yoga. Ha nwekwara ike ịga mgbakọ na nzukọ ọmụmụ ihe, yana mgbakọ kwa afọ. Ndị mmụta na-akwụ ụgwọ ụgwọ, nke a na-eji maka mgbasa ozi mba nke MISA na maka ịkwado ndị oge niile.
Dika o mere na ndi di iche iche, enwere ndi nkuzi ndi gbaliri igbenye Bivolaru ma obu ozizi ndi ozo n'adabere onwe ha, n'enyeghi ego nye MISA ma obu ATMAN. Ufodi n'ime ha gbaliri ichebe onwe ha site na ikwado mmegide a megide MISA site na mmegide ndi agha.
Otu onye nhụsianya nke nwere ike ịhazi netwọk ụwa, dabere na nkuzi nke MISA (ọ bụ ezie na ọ na-agọnahụ ya mgbe ụfọdụ), bụ Narcis Tarcau (bn 1962). O guzobere Agama Yoga na 2002, nke a na-elekọta ugbu a na Thailand, ebe ọ na-enye mgbapụta n'aha Swami Vivekananda Saraswati. Ọ kwadoro mkpọsa mgbasa ozi megide MISA.
Ozizi MISA banyere mmekọahụ na-arụ ọrụ dị mkpa na akụkọ nzuzo nke na-egosi mmegharị ahụ dị ka "òtù nzuzo mmekọahụ." Enweela ebubo na MISA haziri mgbanaka akwụna na mba dị iche iche. E gosipụtaghị ebubo ndị a. N'ezie, ọbụlagodi n'okwu ikpe nke Romania, na-enweghị isi n'ihi na ha nwere ike ịbụ na ha megidere MISA, Bivolaru na ndị isi ndị ọzọ ka ekpechara ikpe na ikpe amaghị ha maka ebubo ndị a.
Dị ka e kwuru na mbụ, Bivolaru enwewo nsogbu iwu mgbe ọ malitere ọrụ dịka onye nkụzi yoga ma jidere ya ugboro ugboro na Communist Romania. Otú ọ dị, mgbe ọdịda nke ọchịchị ahụ gasịrị, mmegide megide "òtù nzuzo" akwụsịghị ma ọ bụ na mgbasa ozi ndị Rom ma ọ bụ n'omume ndị mmanye iwu obodo. MISA wee buru mgbasa ozi mgbasa ozi buru ibu, ebe ebubo ya ebubo na ọ bụ òtù ndị isi, otu "òtù nzuzo" na-eduzi ndị òtù ya, na ikekwe nzukọ ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ.
Nanị na njedebe 1990 bụ MISA karịsịa maka iche echiche ya banyere mmekọahụ. Na Romania, site na mmalite 1990s. Akwụsịre yoga sessions, ndị uweojii gbara ajụjụ banyere yoga, ụfọdụ ewepụkwara ọrụ ha. Echiche ọgụgụ isi nke ndị Rom nọ na-enyocha MISA kemgbe 1997, na-ekwu na ọ bụ egwu nke nchebe mba.
Nnukwu mgbasa ozi na mgbasa ozi nke MISA na-emechi aka na March 18, 2004, ndị uweojii na-akpọ Roman "Ọrụ Kraịst." Gendarmes na ndị agha na ndị agha pụrụ iche, masked na njikere na egbe igwe na Makarov pistols, tinyere ndị ọkàiwu na ndị bịara TV , mebiri ọnụ ụzọ ma banye MISA ashrams iri na isii n'ime obodo Romania n'otu oge na asaa nke ụtụtụ. Egwuregwu TV ndị dị na ya kwadoro ntọhapụ mgbasa ozi, na-ekwuputa na "taa na 7: 00 am, ndị uweojii na-arụ ọrụ kachasị njọ megide ọgwụ ọjọọ na ịzụ ụmụ mmadụ n'akụkọ ihe mere eme -Revolution Romania. "N'eziokwu, a chọghị ọgwụ ọ bụla, a dịghịkwa ebubo ebubo maka ịzụ ahịa ọgwụ ọjọọ, ọ bụghịkwa na MISA kpatara mwakpo ahụ n'ozuzu ya.
N'ezie, ịnwa ịkwado ụmụ akwụkwọ MISA n'afọ ndị sochirinụ emezughị. Enwere otu ihe. N'ime ndị a kpọgara ndị uweojii ka ha jụọ ajụjụ na 2004 bụ MD dị afọ iri na asaa. E zigara ya ajụjụ gbasara ogologo oge, nwatakịrị nwanyị ahụ bịanyere aka na nkwupụta na-ekwu na Bivolaru nwere mmekọahụ na ya. Ozugbo ndị uweojii napụrụ ndị uweojii, MD na-agbataghachi ozugbo ma kwuo na ọtụtụ ajụjụ ọnụ na mgbasa ozi na "nkwupụta" ya ka a na-apụnara. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na afọ iwu nke nkwenye maka mmekọahụ na Romania bụ iri na ise. Otú ọ dị, iwu ahụ na-eme ka ndị nkụzi ha na ụmụ akwụkwọ ha nwee mmekọahụ. Ndị omekome wuru mmekọrịta dị n'etiti MD na Bivolaru dịka otu n'etiti ụmụ akwụkwọ na onye nkụzi, ọ bụ ezie na ha abụọ gọrọ na nke a bụ ikpe ahụ, ma e gbara akwụkwọ àmà na ọ dịghị etinye aka na klas ndị Bivolaru kụziri.
E jidere Bivolaru, na mbụ maka ịgafe nke iwu na-akwadoghị (ọ bụrụgodị na ọ nweghị iwu ọ bụla maka ịgafe ókèala), ma boo ebubo asaa dị iche iche. Ndị a gụnyere ịzụ ahịa ụmụ mmadụ (dabere na ụgwọ nke ndị òtù MISA rụrụ maka njem na-enweghị ụgwọ zuru oke), ịzụ ahịa ụmụntakịrị, na mmekọrịta dị iche na ụmụntakịrị dị iche iche, tinyere MD. Ihe nchịkwa iwu nke nchịkọta 2004 mere na ọchịchị ise dị iche iche: Romania, Sweden, France, Italy, na Ụlọikpe Europe nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Strasbourg.
Na Romania, ikpe ọkàiwu ahụ megide Bivolaru gbasara nkwanye ùgwù nke mmekọahụ na-adaba ngwa ngwa, a chọpụtakwara ya na ọ bụghị onye ikpe mara ma na ọkwa mbụ na mkpesa. Ma, ọkàiwu ahụ rịọrọ Ụlọikpe Kasị Elu, nke na June 14, 2013 gbaghaara akwụkwọ iwu mbụ na nke abụọ na-emetụta nanị mmekọahụ ahụ e kwuru na ya na MD. N'ihi mmejọ a, Bivolaru nwetara mkpọrọ dị arọ isii dị arọ. Ọ mere mkpesa na akwụkwọ ndị MD ugboro ugboro gọrọ agọ ọ bụla na mmekorita ya na-ekwetabeghị, a nụghịkwa ya site na ọrụ nchịkwa ụwa dịka ọ rịọrọ.
Bivolaru, n'eziokwu, anọghị na Romania na 2013. Enwere onwe ya n'ụlọ mkpọrọ mgbe ọ na-echere ikpe, na 2005 o kpebiri ịgbaga obodo ya wee gbaga Sweden, bụ ebe ejidere ya ọzọ na-esote arịrịọ ndị ọchịchị Romania. Otú ọ dị, na December 2005 Courtlọikpe Kasị Elu nke Sweden jụrụ arịrịọ ndị Romania ka ha nyefee ya ma nye iwu ka a tọhapụ Bivolaru ozugbo, na-ekwenye na echiche okpukpe ya kpaliri ya ikpe ya. Na 2006, Bivolaru nwetara ọnọdụ nke onye gbara ọsọ ndụ na Sweden.
Otú ọ dị, na 2016, e jidere Bivolaru mgbe ọ na-eme njem na France (obodo nke na-abụghị karịsịa ọbịa n'ebe ndị a na-ewere na ha bụ "òtù nzuzo," maka ileta akwụkwọ ziri ezi, mgbe Romania nwetara nsonye ya na ndepụta nke ndị Europol kasị chọọ ndị gbara ọsọ ndụ. Na ndị na-achị Romania, ndị ọchịchị Romanian kọwara na ụlọ ọrụ Europol bụ "mmegbu nke ụmụaka na ụmụ foto na-akpali agụụ mmekọahụ," ebe ọ bụ eziokwu na a mara ya ikpe na 2013 naanị n'ihi na enwere mmekọahụ na MD A agha iwu maka mbubata ọzọ soro, ndị ọchịchị France kpebiri na nke mbụ na mkpesa na Bivolaru ka a ga - ewebata na Romania, n'agbanyeghị na ọ bụ onye gbara ọsọ ndụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Sweden. Na July 22, 2016 Bivolaru kpọgara Romania, a tọhapụrụ ya na September 13, 2017.
Na mgbakwunye na ijere 2013 ahịrịokwu ya, a nyochawo ya maka mgbapụ ya na Romania na 2005, a kwatuwokwa ikpe maka ịzụ ahịa ụmụ mmadụ. N'aka nke ya, Bivolaru tinyere akwụkwọ maka nyochagharị nke mkpebi ikpe nke Ụlọikpe Kasị Elu nke 2013 na ihe MD, dabere n'eziokwu ahụ Ụlọikpe ahụ kwetara ka ọ nụ ya na Sweden site na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ agha wee nyefee mkpebi ya n'echereghị Sweden iji kwe ka ya ajuo ya. Enwere ike ịchọta arịrịọ a maka ịmegharịghachi na February 2017.
Ndị uwe ojii Romania nọkwa na-enye ndị nwe obodo na mba ndị ọzọ ebe MISA nọ na-enye ozi, ma site na netwọk mba niile nke mmegide nzuzo. Dabere na ozi a, mgbe chi bọrọ na Disemba 6, 2012, ndị uwe ojii wabatara n'ụlọ nke ndị amaala iri abụọ na ise na ndị ọbịa si Italytali. Fọdụ bụ ụmụ akwụkwọ nke MISA ebe ndị ọzọ bụ naanị ndị ikwu na ndị enyi. E jidere ọtụtụ narị akwụkwọ, gụnyere ihe ọmụmụ yoga, kọmpụta, ekwentị, vidiyo, na akwụkwọ akụkọ nke onwe. Iwu nyere ikike ịnara njide a kpọtụrụ aha ebubo ndị metụtara ịgba izu mpụ, ịgba akwụna, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, ịgba ohu, na ime ihe ike n'ụzọ mmekọahụ. Enweghị ihe akaebe na-akwado ebubo ndị a egosiputara n'ihu ọha ma ọ bụ ebubo ebubo na ụbọchị edere a.
N'ikpeazụ, ụmụ akwụkwọ MISA kwenyere na e jiri ha eme ihe mgbe 2004 wakporo kpọgara ikpe Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ (European Court of Human Rights (ECHR) na Strasbourg. Tupu e kpebie ikpe ha, ECHR emeelarị mkpebi nwa akwụkwọ MISA, Dana Ruxandra Atudorei mma, bụ onye gbara afọ iri na itoolu ka ọ bụrụ onye a ga-ejichi ike na mgbapụta psychiatric n'ihi na ọ na-ekere òkè n'ọrụ ndị ahụ. Na September 16, 2014, na ikpe ahụ Atudorei v. Romania, ECHR kpebiri na e mebila ikike ya. Nke a bụ mmalite nke mkpebi mkpebi ECHR Amarandei na ndị ọzọ v. Romania nke Eprel 26, 2016, ebe mmadụ iri abụọ na isii nke MISA bụ ndị e megburu na mwakpo 2004 nwetara € 291,000 na mbibi site n'aka gọọmentị Romania. Mkpebi ahụ dị mkpa ebe ọ bụ na o kwuru na mwakpo ahụ dabere na ezughi oke akaebe nakwa na iji oke ime ihe ike na nke mmụọ na-emebi ikike nke ndị mkpesa ahụ. N'ikpeazụ, na February 28, 2017, na mkpebi ahụ Bivolaru vs. Romania, ECHR nyere iwu ka Romania kwụọ ụgwọ Euro 6,980 Bivolaru n'ihi na ejidere ya na iwu akwadoghị na 2004.
Site n'echiche nke onwe ya, mkpọsa a na-emegide Bivolaru gụnyere nrụgide sitere na Masonic na òtù mgbaasị ndị ọzọ na-enye nsogbu nsogbu ya. MISA ebipụtala akwụkwọ ozi na-enweghị aha zigara Bivolaru tupu ejidere ya na nnyefe ya na 2016, na-ekwe nkwa enyemaka ma ọ bụrụ na ọ ga-akwụsị nkatọ ọ na-akatọ Freemasonry na "usoro ụwa ọhụrụ," ma yi ya egwu ịtụ ya mkpọrọ ma ọ bụrụ na ọ meghị, yana ihe akaebe na akwụkwọ ozi (onye isi ya bụ, n'ezie, amaghi) na-n'ezie natara. Ọkammụta Italiantali Raffaella Di Marzio kọkwara na MISA kwuru "mkpa ọ dị Jacques de Molay (1243-1314), Nna-ukwu Ukwu ikpeazụ nke Knights Templar" maka Freemasonry, De Molay gbara ọkụ na Machị 18, 1314. "Mwakpo ahụ megide ebe MISA dị na Romania, nke bụ mmalite nke ikpe ikpe ikpe ụwa niile, nke a na-akpọ 'Operation Christ' (n'onwe ya aha a na-adịghị ahụkebe na mba ndị Kraịst), mere na Machị 18, 2004. Ntughari ikpe nke Bivolaru na France mere na Machị 18, 2016, n'ụlọ ikpe dị n'otu Île de la Cité na Paris ebe a gbara De Molay ọkụ n'elu osisi na Machị 18, 1314. ” Di Marzio na-ekwu na "n'okwu abụọ ahụ, ụmụ akwụkwọ nke MISA kwuru, ndị uwe ojii na ọrụ ikpe nwere obere oge na nkeji ikpeazụ, dị ka a ga - asị na mmadụ nwere mmasị ịnwe ha kpọmkwem na Machị 18 Mgbe ụfọdụ, ụdị ọdachi ndị a dị mkpa. Mgbe ụfọdụ, n'ụzọ doro anya, ha na-abụ ihe ndaba. Ma akụkọ ahụ dum na-agbakwunye ihe na-esi ísì ụtọ na ntanetị nke mmekọrịta dị n'etiti iwu, mmegharị mmegide nzuzo, na esotericism "(Di Marzio 2017).
Mgbasaozi ahụ megide MISA na-egosi otu ihe dị iche iche. Obodo Romanian na-enwe usoro siri ike nke imeziwanye ihe, mgbagwoju anya nke igwe mmadụ, akụ na ụba, na nke ọha na eze siri ike. Saga nke MISA na-ekwenye na Romania ejighi okwu ya na ndị Kọmunist na-abịa. E nwere, n'ezie, ọrụ ịsọ asọ maka ịchịkwa mgbanwe a. Chọọchị Ọtọdọks kwenyere na ọ ga-enwe ike ịnọgide na-arụ ọrụ omenala site na njikọ nke ya na steeti. N'aka nke ya, Ọchịchị na-agbasa n'etiti echiche dị iche iche nke ezi uche, sayensị, na ọganihu, na ike dị iche iche. Ole na ole n'ime ha yiri ka ha nabatara nnukwu ọrụ nke MISA, otu ọhụụ a na-adịghị ahụ anya nke na-anabataghị akụkụ nke fọdụrụ ma na-enye ọgwụgwọ na nsogbu ndị Rom na-adabere na nhụpụ anya nke yoga, ebe ozizi gbasara ahụ na ike ya dị iche iche, gụnyere mmekọahụ, na-atụ aro dabeere na ihe e gosipụtara dika amamihe oge ochie nke yoga yric.
Foto #1: Gregorian Bivolaru.
Image #2: Ihe nnọchianya nke MISA.
Foto #3: Tantric meditation.
Image #4: Yang Yogic Gbasaa.
Image #5: Ihe mmalite si na fim Na-aga n'ihu.
Image #6: arụ ọrụ n'oge a na-agbagha yoga.
Bella Maestrina (nke bụ Carmen Enache, dir.). 2003. Imepụta Ecstasy Mmiri II. Ihe nkiri nkiri. Budapest: Karessa Universal.
Bivolaru, Gregorian. 2011. Ụzọ Nzuzo Na-ezighị ezi nke Ịhụnanya Maka Obi Ụtọ na Mmezu n'Ọlụ Di na Nwunye, 2nd ed. Copenhagen: Natha Publishing House.
Di Marzio, Raffaella. 2017. "MISA, Òtù Na-emegide Okpukpe na Ụlọikpe: Ụkpụrụ Iwu nke Njikọ Esoteric." Akwụkwọ e dere na nzukọ 2017 na-enwe kwa afọ nke ESSWE (European Society for Study of Western Esotericism), Erfurt, Germany, 1- 3 June 2017.
Introvigne, Massimo. 2017. "Mmekọahụ, Movies, na Deviance: Ụgha nke Carmen Enache."Akwụkwọ e dere na nzukọ 2017 na-enwe kwa afọ nke ESSWE (European Society for Study of Western Esotericism), Erfurt, Germany, 1-3 June 2017.
Mărcuş, Carmen. 1997. "Efectele psiho-sociale ale practicii yoga." Pp. 131-140 na Revista de Cercetări Sociale, 3.
Matei, Rafael 2013. “Unda de şoc determinată de meteorul din Rusia a fost atât de puternică încât a înconjurat Pământul de două ori”. 18 July 2013. Nweta site na http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7622 na Machị 20, 2017.
Stoian, Mihai. 2016. "Art dị ka ụzọ ziri ezi iji kpọlite ​​mkpụrụ obi." DVD. Copenhagen: Natha.
Thejls, Sara Møldrup. 2015. "MISA na Natha: Akụkọ Pụrụ Iche nke Ụlọ Akwụkwọ Yoga Tantric nke Rom." Pp. 62-76 na James R. Lewis na Inga Bårdsen Tøllefsen (eds.), Akwụkwọ ntụziaka nke okpukpe ọhụrụ Nordic, Leiden na Boston: Iju.
Nnadozie. nd “Na-enweghị atụ, profund revoltător, dar adevărat: Iată care este 'arta' abjectă pe care o promovează francmasonii!” Nweta site na http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=3336 na Machị 20, 2017.
Yogi Blogger, "Gregorian Bivolaru, Jan van Helsing al României," January 18, 2012. Nweta site na http://misa-yoga.blogspot.com/2012/01/gregorian-bivolaru-un-jan-van-helsing.html na March 20, 2017.